Ukwakha Isixhumanisi Nekhwalithi Yobungozi ngochwepheshe we-Semalt u-Ivan Konovalov
Inothi labahleli: Ivan Konovalov ungumphathi wempumelelo yamakhasimende eSemalt. Inkampani inezinkampani ezingaphezu kuka-10 000 eziphumelelayo futhi ziqhubekela phambili phambili ngezobuchwepheshe obuhle kakhulu.
Izinjini zosesho zenza umsebenzi omuhle wokubeka amawebusayithi aphezulu awanenani elikhulu kumbuzo wosesho lomvakashi.
Njengoba izinjini zingathumela amaphesenti angama-60 we-traffic mahhala kwisayithi lakho, asikho isizathu sokuthi ungakha izixhumanisi kusayithi lakho futhi ujabulele le ngxenye enkulu yamahhala traffic.
Isihloko sokwakha isixhumanisi sikhulu kakhulu, futhi uzolifunda ngesikhathi futhi njengoba uqhubeka uzama.
Noma kunjalo, kunolunye ulwazi olubalulekile kuwe ukuze ufunde ukuqala nokugwema izingibe ezivamile.
Kungani Ukuhlanganisa Isizinda Kubalulekile
Uma ufuna ukuthola into efana nesiqandisini, ungenzenjani esimweni esinjalo?
Ungase uthole isitolo lapho ungathenga khona umkhiqizo, kungakhathaliseki lokho kungabathengisi abaxhunyiwe ku-intanethi noma ku-intanethi.
Okuwukuphela kokungena kwakho esitolo nokuthenga isiqandisini ngaphandle kokucela noma ubani ukuphakanyiswa kwabo ukuthi ngabe uyakwazi ukwenza isinqumo esinolwazi.
Uzokhetha inketho ngokusekelwe ekuhlangenwe nakho kwakho, okuthandayo, noma mhlawumbe ngokusebenzisa isincomo esivela kumngane noma ilungu lomndeni. Kodwa-ke, uma uthenga okokuqala esiqandisini empilweni yakho, futhi ufuna ukwenza isinqumo esinolwazi, ungenzenjani? Cishe, uzobheka ezinye izincomo ezivela kumuntu onolwazi ekuthengeni isiqandisisi. Uzokwethemba isahlulelo somuntu futhi uqhubeke nokuthenga kwakho, akunjalo?
IWeb Web Wide iyindawo enkulu. Lapho izinjini zokusesha kufanele ziphendule umbuzo wesvakashi, zibuka iwebhu ukuze zihambelane nemiphumela. Njengoba kunamawebhusayithi amaningi anganikela ngolwazi olufanayo, kunzima kuma-search ukubeka amasayithi amahle kakhulu ngokulandelana kwemiphumela yosesho. Esimweni esinjalo, izixhumanisi zisiza.
Ake sithi unewebhusayithi yokuhamba lapho uhlinzeka ngamasevisi ngamathikithi okubhuka nokuhlala emahhotela ahlukahlukene ezweni lonke. Manje, uma unezixhumanisi ezingenayo kusayithi lakho kusuka kwezinye izindiza ezihamba phambili noma amahotela, izosizuzisa kakhulu iwebhusayithi yakho futhi ikusize ukuba uthole indawo ephezulu kuma-SERP (Amandla Wosesho WemiSebenzi) uma kuqhathaniswa namanye amasayithi afana nawo eyakho. Izixhumanisi zilingana nokuthembela..
Uma amasayithi amabili efana nokuqukethwe, lowo othola isikhundla esiphakeme yisayithi elakhiwe ukuthembela kakhulu ngezinjini zokusesha .
Uma wena udala izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi, wabelana ngolwazi futhi uthembeke phakathi komunye nomunye ngendaba yakho. Izinjini zokusesha ziyakuthanda ukuxhumanisa.
Izixhumanisi ezingenayo neziphumayo
Izixhumanisi ezingenayo yizixhumanisi ezingenayo kwamanye amawebhusayithi, kanti izixhumanisi eziphumayo zibhekisela kulabo abathumela isivakashi kusuka kuwebhusayithi yakho kwenye indawo ye-intanethi.
Izixhumanisi ezingenayo zibonisa ukuthi enye ingosiwebhusayithi ikuthemba kangakanani futhi izixhumanisi eziphumayo zibonisa ukuthi ubeka kangakanani ukwethembeka kwesinye isayithi .
Ikhwalithi ihlale ibalulekile kubantu, futhi kuyinto futhi lapho izinjini zokusesha zibeka khona inani.
Inhloso yabo ukuletha imiphumela efanele kakhulu futhi ebalulekile embuzweni womsebenzisi ngenkathi kukhishwa ukhula noma ababhali beqembu.
Lokhu kusho ukuthi baqinisekisa ukuthi uthola imiphumela efanele ezindaweni ezilungile ngaso sonke isikhathi.
Kuyini izinga lokuxhumanisa?
Lesi yisici esibalulekile esiza izinjini zokucwaninga zithole ikhwalithi nokuthembeka kwewebhusayithi.
Uma udala izixhumanisi kusayithi lakho, kubalulekile ukuthi zivela ezithembekile no amasayithi aphezulu .
Njengoba kunamawebhusayithi angenamkhawulo esihlokweni esinikeziwe kuwebhusayithi yakho ukuxhuma futhi uthole izixhumanisi ngokubuyisela, futhi ekugcineni uzuze izinga eliphezulu emakhasini omphumela wosesho, kubalulekile ukuthi lezo zixhumanisi zivela kumasayithi aphezulu okushiwo isigaba.
Izixhumanisi ze-Semalt ezivela kumasayithi aphezulu ziyisibonakaliso sokuthi amawebhusayithi afaka wena kanye nalezi zixhumanisi ezingenayo zitshele izinjini zokusesha ukuthi iwebhusayithi yakho ingase ibe nento ewusizo kumthengi ukuthi ayibheke.
Lona uhlobo lwencomo ozoyifuna uma uthenga ingqikithi, njengoba kuxoxwe ngenhla.
Ugcina izincomo kuphela kwisifundo somuntu ngamunye ogunyaziwe kule ndaba ethile Source .
Izixhumanisi ezingenayo eziphakeme kakhulu ezingaphumelela ongakwazi ukuziphatha ukuze ufike esayithini lakho, kuzobe ngcono ukuthi izitifiketi zakho zizoba ngcono!